I-Million Dollar Wiki Contest evela kuJohn Chow dot Com | Martech Zone
NgoMvulo, Agasti 13, 2007 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
UJohn Chow dot Com ibambe obunye ububi ukhuphiswano lwebhlog. Unika iscreen se-LCD esine-24 ububanzi kunye nekopi esayiniweyo yencwadi ethengisa kakhulu, i-4-Hour Workweek! Fumanisa ukuba ungene njani Apha. Ukhuphiswano luxhaswe ngu Isigidi seDola Wiki. Sebenzisa ikhowudi yekhuphoni uJohnChow ukugcina i-10 yedola kwiphepha.
Ngokuhlwanje ndithenge iphepha elithi “Imeyile”… bendimangalisiwe ukuba livulekile! Ndonzakele ukuhlawula iidola ezili-100 zelo phepha kuba ndilibale ukufaka ikhowudi yekhuphoni. Ndabhala abathengisi ndabaxelela ukuba andiyifuni i- $ 10, kodwa ndifuna amangeniso ongezelelweyo kukhuphiswano lukaJohn !!!
Ngaphezulu kwe- $ 9,000 ngoJulayi!
Qaphela kuJohn Chow: Kwinyanga ephelileyo ndenze $3,300 kule bhlog ndiyabulela kwiingcebiso zakho kwaye wongeze enye $6,000 Kwiikontrakthi zophuhliso endinokuthi ngqo ibhlog yam. I $ 2,700 ye-3,300 yeedola 'yayingendawo' kodwa yanceda ukuhlawulela ukulungiswa konyana wam kunye nekhompyuter yakhe njengoko esiya ekholejini. Enkosi, John!
I-imeyile ROI: Akukho Brainer kwiNkampani enkulu
Aug 13, 2007 ngo-10:52 PM
I sure wish I know what the hell I was doing wrong when it comes to this AdSense bull .. Ndinethamsanqa ukuba ndenza nokuba kufutshane ne 50cents ngosuku .. ngokuqhelekileyo i-zilch
Agasti 14, 2007 kwi-7: 34 AM
UGoogle akenzi kakuhle loo nto kwindawo yam. Unokufuna ukuzama ukufomatha iintengiso ukuba zihambe nomxholo wakho kunokuba ube nemibala eyahlukeneyo yangasemva kunye nemida.
Andikhumbuli ukuba ndiyifunde phi kodwa abantu bakulungele ngakumbi ukucofa ukuba abacingi ukuba yintengiso ecacileyo. Yiyo loo nto iintengiso ezibhaliweyo zihlala zicofa ngaphezulu kunomfanekiso weentengiso.
Kwakhona - le ibiyi-BIG, ngaphandle kwesiqhelo, inyanga. Ndingathanda ukuba ibe yesiqhelo!
Iphepha lasekhaya lesigidi seedola
Agasti 16, 2007 kwi-10: 29 AM
Ndifumene iphepha lakho ngelixa ndiphanda malunga neMillion yeDola Wiki. Emva koko ndibhalise kwisondlo sakho;)
I-MDW linyathelo elinyukayo ukusuka kwi-MDHP malunga nokubonelela ngonikezelo olungcono kunye nangokwexabiso. Ndicinga ukuba i-buzz yokuqala kunye ne-buzz yamva nje evela kuJohn Chow iya konyusa le ndawo ibe yindawo eqaqambileyo ukuyivumela ukuba ikhule phantsi kwesantya sayo.
Agasti 16, 2007 kwi-11: 41 AM
Ndiyavuya ukuba nawe apha! Ndivumelana nawe ngentliziyo epheleleyo ngombono kunye nokubulawa!
Enkosi ngokuphawula kwaye ndiyavuya ukuba ubhalisile!